Windows Media Player bụ otu nke kasị mma egwuregwu na e agbakwunyere n'ime ọ bụla OS na Ya mere ọrụ n'anya na-eji ọkpụkpọ dị ka mpụga download na-adịghị chọrọ na nke a na wuru na atụmatụ obi sie na ndị ọrụ na nke kacha mma mmepụta. Otú ọ dị ọtụtụ njehie na mbipụta e achọpụtara na-eji usoro mgbasa ozi na ọkpụkpọ na isiokwu a ka e eduzi kwupụta a nke iji jide n'aka na ndị ọrụ mgbe ihu ụdị ọ bụla nke nke na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị nkuzi na-agụ iji dozie mgbasa ozi ọkpụkpọ metụtara mbipụta na klas.
Part1: reinstall windows mgbasa ozi ọkpụkpọ
Part2: rụkwaa windows media ọkpụkpọ na Microsoft Fixit ngwá ọrụ
Part3: 4 ngwaọrụ ịrụzi windows mgbasa ozi ọkpụkpọ
Part4: Windows Media Player nnyemaaka
Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe mkpebi a onye ọrụ nwere ike ide na jide n'aka na Windows Media Player metụtara nsogbu na-kpebiri na àgwà na klas. Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nke mbipụta na na-eche na nke a nke a na ngalaba nke nkuzi bụ na-agụ dị ka a hụrụ na onye ọrụ nakwa dị ka usoro metụtara mbipụta na-ọ bụghị nanị na egbo media ọkpụkpọ reinstalled ma n'ozuzu nsogbu na-catered na nke kacha mma n'ụzọ. Usoro na e kwuru n'okpuru bụ onye na-nanị dabeere windows OS na Ya mere ihe ọ bụla a chọrọ iji jide n'aka na usoro a biri na mma. Niile wuru na ngwá ọrụ e iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a, ya mere ọ dị ezigbo mkpa iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na-arụpụta mgbe usoro a soro na zuru enweghị awụgharị ọ bụla nzọụkwụ. The screenshots na e agbakwunyere n'ime usoro-emekwa ka ọ jụụ mfe na-eso na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ ga-bụghị naanị na-arụpụta ihe kasị mma ma n'ozuzu irè nke usoro na-enwekwu dị ka onye ọrụ na-akawanye mara ndị dị iche iche functionalities nke usoro iji jide n'aka na ọ bụrụ na e a abụọ oge mgbe ahụ ndị a okwu na-egbo site na-aga site na nke a nkuzi. Usoro onwe ya bụkwa nnọọ mfe na-eso na ya mere ọ dị mkpa iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye a ọma adịgide na usoro na e kọwara dị ka ha bụ maa mma niile ugboro. Nzọụkwụ ndị a ga-soro dị ka e kwuru n'okpuru maka onye ọrụ iji nweta ezigbo nghọta:
1.The ụzọ na-a ga-agbaso bụ Malite> akara panel ịkpalite usoro na-eme ka n'aka na uninstall ụkpụrụ-agbaso:
2.The windows atụmatụ button bụ mgbe ahụ na-enwe iji jide n'aka na usoro a soro na nke kacha mma n'ụzọ:
3.The mgbasa ozi ọkpụkpọ igbe bụ na-kpacharaghị iji jide n'aka na Windows Media Player na-uninstalled:
4.The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ka pịa ee ma ọ bụrụ ihe ọ bụla njehie kpaliri ya mere na ọ dịkwa mkpa iji jide n'aka na onye ọrụ na-echere iji jide n'aka na usoro completes na zuru:
5.The OK bọtịnụ a na-ahụ na-kụrụ iji jide n'aka na uninstall completes:
6.The usoro a ga-restarted iji jide n'aka na usoro completes na zuru:
7.By esonụ kpọmkwem otu usoro onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na Windows Media Player igbe na-enyocha na usoro a na restarted ọzọ mezue reinstall usoro na zuru:
Microsoft Fixit Ngwá Ọrụ bụkwa otu nke kasị mma na nke Steti nke nkà na ngwá ọrụ na-dị mwute ikwu na-akwado site na nanị XP na mgbe ọ na-abịa ka ọhụrụ OS mgbe ahụ windows 7 bụ onye na e akwado na nke a iji jide n'aka na ihe iseokwu na ofu. Ndị ọzọ nile windows OS ka anaghị akwado na a usoro. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na Windows Media Player 10, 11 na 12 na-akwado omume a na ojiji ndu na bụ a ga-agbaso e kwuru ka n'okpuru nke mere na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma:
1.From URL http://go.microsoft.com/?linkid=9775982 onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na exe faịlụ nke fixit ngwá ọrụ ebudatara:
2.The chọrọ ọnọdụ bụkwa na-ahọrọ iji jide n'aka na ngwá ọrụ ebudatara na nke kacha mma na ọnọdụ dị ka kwa onye ọrụ ntụziaka:
3.The igba egbe fixit button a na-ahụ na-enwe iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ngwá ọrụ gburu:
4.From ndepụta nke fixes onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na pụta ìhè nhọrọ họrọ iji dozie ihe iseokwu nke mgbasa ozi ọkpụkpọ na kwa mezue usoro na zuru:
E wezụga Microsoft fixit ngwá ọrụ na-esonụ bụ ndị 4 ngwaọrụ ndị na-aga ka e gbuo iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri:
Mepụtara site Coolbits a usoro bụ ihe kasị mma na free iji jide n'aka na ihe iseokwu nke Media ọkpụkpọ na-egbo. Onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ngwá ọrụ na-agba ọsọ nke mere na njehie nke mgbasa ozi ọkpụkpọ na-kpebiri ozugbo o kwere omume na Ya mere ọ dịkwa nnọọ mkpa iji jide n'aka na ngwá ọrụ na-eji dị ka kwa ntuziaka ntuziaka na e ebudatara na usoro ihe omume.
Na dị nnọọ a file size nke 1.3MB Ike warara bụ otu nke kasị mma omume na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe fixtures mgbe ọ na-abịa Windows Media Player dị ka ọ na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndị ọkaibe omume ibudata na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na nke kacha mma e nyefewo ha n'aka na Ya mere nkezi fim nwekwara elu mgbe ọ na-abịa ngụkọta downloads.
Riva tuner bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe omume nke na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe omume mgbe ọ na-abịa Windows Media ọkpụkpọ nfiksi. Ọ na-agba na elu na gburugburu ebe obibi na e agbakwunyere n'ime ya iji jide n'aka na ihe omume mgbe doo ọ bụla nke unaddressed.
The ala ngosi nke na-chere ihu onye ọrụ n'oge Ịgba Cha Cha pụrụ ịbụ oké nsogbu na ya mere na RefreshLock na-ahụ na nke a nke na ndị Windows Media Player metụtara mbipụta na-kpebiri n'ime chaachaa iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na mmekọrita mgbasa ozi ọkpụkpọ nke fixtures. Ọkọlọtọ na ọrụ enyi na enyi interface na nke a na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma echiche na ọkọkpọhi nke ofu ka anya dị ka usoro ihe omume na-agba ọsọ.
Wondershare 7 ụzọ ịrụzi Windows Media Player na ya ọkaibe atụmatụ na n'ozuzu functionalities bụ ihe kasị mma na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe akakabarede ahụmahụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu na ọ bụkwa na-kwuru na mfe aga na-arụ ọrụ nke usoro ihe omume bụ ihe na mere dị mma ọbụna karị. Ọ bụghị nanị na-akwado ndị na n'ozuzu format akakabarede na a ngwa ngwa n'ụzọ ma na 150+ format nkwado ọ na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ahụmahụ na nke a.
Top 10 Windows 10 gburugburu maka Windows 8
> Resource> Windows> 7 ụzọ ịrụzi windows mgbasa ozi ọkpụkpọ